Nhau - Chii chichaitika kana iyo humburumbira musoro gasket yatyoka
Chii chichaitika kana humburumbira musoro gasket watyoka
Injini cylinder musoro gasket unopisa uye compression system mweya leakage kazhinji kukundikana. Cylinder musoro gasket kutsva kuchanyanyisa kushatisa mashandiro einjini, kana kutotadza kushanda, uye zvinogona kukonzera kukuvara kune zvimwe zvine hukama zvikamu kana zvikamu; mukumanikidza uye nesimba sitiroko yeinjini, kuiswa chisimbiso kwenzvimbo yepamusoro yepistoni kunofanirwa kunge kusiri iko, Hapana mweya unodonha.
1. Kukundikana kuita mushure mekunge humburumbira musoro gasket watyoka
Nekuda kwenzvimbo dzakasiyana dzesilinda musoro gasket yakapiswa, zviratidzo zvekutadza zvakasiyanawo:
furidza-nepakati pemasirinda maviri ari pedyo
Pasi pechirevo chekusashandura kudzvinyirira, ndakazunza crankshaft ndikanzwa kuti kumanikidzwa kuri mumachubhu ese ari maviri hakuna kukwana. Injini payakatanga, utsi hutema hwakaonekwa, uye kumhanya kweinjini kwakadzikira zvakanyanya, zvichiratidza kusakwana kwesimba.
2. Cylinder musoro unobuda
Iyo yakadzvanywa yakakwira-yekumanikidza gasi inotizira mukati meye cylinder musoro bhaudhi gomba kana kudonha kubva kune yakabatana pamusoro peiyo humburumbira musoro nemuviri. Kune furo jena jena mumhepo inodonha. Kana mweya unodonha wakakomba, ichaita ruzha rwe "padyo", dzimwe nguva ichiperekedzwa nemvura kana oiri kubuda. Iwe unogona kuona inoenderana cylinder musoro ndege uye nharaunda yayo panguva yekukatanura uye kuongorora. Iko kune pachena kabhoni dhipoziti pane bhaudhi gomba remusoro we humburumbira.
3, mupasi remafuta emafuta
Yakakwira-yekumanikidza gasi inomhanyira mukati mekuzora mafuta nzira pakati peinjini block uye nesirinda musoro. Iyo tembiricha yemafuta mupani yemafuta inogara yakakwira kana injini ichimhanya, iyo viscosity yemafuta inova yakatetepa, kumanikidza kunodzikira, uye kuora kuri kukurumidza. Iko kune mabhuru ari pachena mumafuta anotumirwa kumusoro kwechikamu cheiyi humburumbira kuzodza mweya wekuparadzira mweya.
4, yakanyanya-kumanikidza gasi inopinda inotonhorera bhachi remvura
Kana injini ichitonhora tembiricha yemvura iri pasi pe50 ℃, vhura iyo tangi yemvura, iwe unogona kuona kuti pane mabhuru ari pachena ari kubuda uye achibuda mutangi remvura, uye yakawanda mweya unopisa unoburitswa kubva mumuromo wetangi remvura. Sezvo tembiricha yeinjini ichiwedzera zvishoma nezvishoma, Iyo kupisa kwakaburitsa kubva mumuromo wetangi remvura zvakare kwakawedzera zvishoma nezvishoma. Mune ino kesi, kana iyo yekufashukira pombi yetangi yemvura yakavharwa uye tangi remvura rizere nemvura kune iyo muvharo, izvo zvinoitika zvemabhuru anomuka zvichave zviri pachena, uye chiitiko chekubika chichaonekwa mune zvakakomba zviitiko.
5, humburumbira hweinjini nejaketi yemvura inotonhora kana mafuta ekuzora anopfuura
Kuchave nemabhuru emafuta eyero-nhema achiyangarara pamusoro pepamusoro pemvura inotonhorera mutangi remvura kana pachave nemvura iri pachena mumafuta mupani yemafuta. Kana izvi zviviri zvinoputika-nezvakaitika zvakakomba, mvura kana mafuta anenge ari mukuwisira.